नेपालमै छ यो चमत्कारी मन्दिर : बोली फुटेको छैन भने बच्चालाई यो ठाउमा लैजानुहोस,नबोल्ने बच्चा बोल्न थाल्छन् (भिडियो) – Dainiksamchar
HomeVideoनेपालमै छ यो चमत्कारी मन्दिर : बोली फुटेको छैन भने बच्चालाई यो ठाउमा लैजानुहोस,नबोल्ने बच्चा बोल्न थाल्छन् (भिडियो)
October 11, 2020 admin Video 949
सूर्यविनायक क्षेत्र धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणवाट अति महत्वपूर्ण छ। यो भक्तपुर नगरबाट २ कि.मी. दक्षिण सिपाडोल गाविसमा पर्दछ।
यहाँको प्रसिद्ध सूर्यविनायक (गणेश) मन्दिर लिच्छवि कालमा शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाइन्छ। काठमाडौं, पाटन, बनेपा, भक्तपुर जिल्लाका भक्तजनहरू हरेक मंगलवार र माघ महिनामा ठूलो र्घुइंचोका साथ यस गणेश मन्दिरको दशनार्थ आउने गरेको पाइन्छ।
यसका साथै हिड्न नजानेका बालबालिकालाई यहाँ ल्याएर छोडिदिनाले हिड्न थाल्छन् भन्ने गहिरो जन विश्वास रहि आएको छ । गणेशको दर्शन गर्लामा मनमा आनन्द आउनुका साथै मनले चिताएको पुग्ने बताइन्छ भने कसैकसैले यहाँ दर्शन गर्नाले पुत्रलाभ हुने पनि बताएका छन् ।
सुर्य विनायकको उत्पत्तिको बारेमा विभिन्न किम्वदन्तीहरू पाइन्छन् । एक किम्वदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा एक ब्राहृमण पशुपतिनाथका परम भक्त थिए ।
हिँड्दै जाँदा यही (हाल सूर्य्विनायक रहेको) स्थानमा आई पुगेर बास बसे । भोलिपल्ट बिहान सूर्य पहिलो किरण परेको स्थानमा गणेश उत्पत्ति भई ब्राहृमणको छोरो बचाइदिए । सूर्यको किरणसँगै उत्पत्ति भएको हुनाले सुर्यविनायक नाम रहेको मन्दिरका पुजारी बताउँछन् ।
पछि ब्राहृमण वृद्ध भएकोले आफ्नो दर्शन गर्न आउन गाह्रो होला भनेर सुर्यविनायककै परिसरमा उत्पत्ति भएको कथन रहेको पाइन्छ ।
खुसीको खबर भर्खरै लाहुरेलाई हुने भयो २० बर्ष जेल। बल्ल सोनीले न्याए पाउने भईन्।
September 29, 2020 admin Video 1070
खुसीको खबर भर्खरै लाहुरेलाई हुने भयो २० बर्ष जेल। बल्ल सोनीले न्याए पाउने भईन्। यो नि पद्नुहोस, काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व रहेको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिएको छ । काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञा
October 9, 2020 admin Video 696
काठमाण्डौ – बबिता बानियाँ जेरी आमा बनेकी छिन् । गत साल शंकर क्षेत्रिसंग बैबाहिक जीवनमा बाधिएकी बबिता यही आउँदो दसैंमा आमाको भुमिकामा देखिने भइको थिइन् तर म्यूजिक भिडियो भन्दा अगाबै उनी आफ्नै सन्तानकी आमा भैसकेकी
October 5, 2020 admin Video 387
काठमाडौ । आफुलाई भगवानको विशेष शक्ति छ भन्दै दावा गर्ने एक महिलाको विश्वासमा पर्दा दागंमा एक परिवारको सम्पत्ती सकिएको छ । दागंको घोराहीमा एक युवकको परिवारमा एक जना वृद्ध महिलालाई फ सा एर उनको सम्पत्ती
LEX 18 agenda conversation: Job club (121696)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113599)
Hello world! (113273)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112031)